na tetibola natokan’ny fanjakana hotantanin’ireo solombavambahoaka raha ho an’ity distrika ity manokana. Araka ny fanazavan’ny depiote, Alain Ratsimbazafy, dia tapaka izany taorian’ny dinika nifanaovan’izy mirahalahy tamin’ireo mpikambana mikasika ity famatsiam-bola ity. Anio, mandritry ny fanolorana ireo ben’ny tanàna voafidy tao amin’ity distrika ity izany no hatolotra ireo kaominina tsirairay. Manodidina ny 300 tapitrisa ariary ny totalin’io famatsiam-bola io, raha ny fanamarihana hatrany. Anjaran’ny solombavambahoaka sy ireo ben’ny tanàna moa no miara-mijery ireo sekoly tena mila fanampiana fa raha ny tsikaritra aloha dia ny lafiny dabilio no hita fa tena manahirana ireo sekoly, hoy ny depiote Alain Ratsimbazafy.